Baankiin Dhiigaa Biyyaalessaa ji’oottan 9n darbanitti dhiiga korojoo kuma 171 fi 685 walitti qabuu ibse – Fana Broadcasting Corporate
Baankiin Dhiigaa Biyyaalessaa ji’oottan 9n darbanitti dhiiga korojoo kuma 171 fi 685 walitti qabuu ibse
Finfinnee, Caamsaa 2,2011(FBC)- Baankiin Dhiigaa Biyyaalessaa ji’oottan 9n darbanitti dhiiga korojoo kuma 100 Fi kuma71 fi 685 walitti qabuu danda’uu beeksiseera.
Baankiin Dhiigaa Biyyaalessaa raawwannaa hojii ji’oottan 9n darbanii bakkaa hoggantoonni naannolee 31 ol ta’anii fi itti gaafatamtoonni Baankii Dhiigaa Biyyaalessaa argamanitti gamaggameera.
Gabaasa raawwannaa hojichaa dhiyaateen ji’oottan 9n darbanitti sadarkaa biyyaalessaatti dhiiga korojoo kuma 100 Fi kuma71 fi 685 walitti qabuu danda’uu itti aanaan daayreektara olaanaa Baankii Dhiigaa Biyyaalessaa obbo Yaaragaal Bantii dubbataniiru.
Kanaanis karoora qabame keessaa %82 galmaan gahuu ibsanii itti aanaan daayreektarichaa, dhiiga funaanaman keesssaa %58.58 gara dhiiga adda addaatti jijjiiruu kaasaniiru.
Kana bira darbees Tajaajilli Baankii Dhiigaa faaynaasiin akkaataa of deeggaruu danda’u irratti dookimantiin ka’umsaa qophaa’us beeksisaniiru.
Sanadni qorannichaa yaadni akka irratti kennamuuf Dhaabbata Eegumsa Fayyaa Addunyaa Institiyuutii Baajataa fi Ikoonomiksiif ergameera jedhaniiru.
Bara kana qiindoomina Biiroo Eegumsa Fayyaa magaalaa Finfinnee waliin ta’uun Kilinikiin saatalaayitii funaansa dhiigaa akka banamu godhamuu odeeffannoon Baankii Dhiigaa Biyyaalessaa irraa arganne ni mul’isa.
Hojii kana galmaan gahuufis ramaddiin humna namaa adeemsifamee fi meeshaleen guutamee hojjettoonni leenjii irra akka jiran ibsaniiru.
Pilaastikoonni xixiqqoon bishaan dhugaati keessatti argamaa fayyaaf kan sodaachisan…
Dhiibbaan dhiigaa guddaan fayyumma sammuu Fiduu danda’a
Dr Amiir Amaan, Dr Teediroos Adihaanoom waliin mari’atan